Isbeddellada Suuq-geynta Dijital ah & Saadaalinta sanadka 2014 | Martech Zone
Waxaan ogahay inay jiraan xoogaa ku celcelin ah halkan qoraalada qaar Waxaan la wadaagi jiray meesha aan aaminsanahay in suuqleydu u baahan yihiin inay diirada saaraan feejignaantooda sanadkaan… laakiin qormadan xog uruurintu way soo koobaysaa wayna fiicnayd inaan lala wadaagin!
Sannadka 2014 - suuqgeynta dhijitaalka ah waxay gaadhay heer cusub oo wali way sii socotaa. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah suuqleyda ayaa wali isweydiinaya - “Waa maxay sababaha saameyn ku yeelan doona dadaalladayda suuq-geynta sanadkan iyo illaa heerkee? Ma jiraan wax kadis ah oo sugaya? ” Laga soo bilaabo infographic Position2 Isbeddellada Suuq-geynta Dijital ah & Saadaalinta sanadka 2014.
Mobilada, Suuqgeynta Mawduuca, Suuqgeynta Emailka, Suuqgeynta otomaatigga iyo Warbaahinta Bulshada waa inay ugu sarreysaa liiska qof walba ee xeeladaha diiradda la saarayo!
Tags: 2014isbeddellada suuqgeyntaemail isbeddellada suuqgeyntainfographicisbeddelada otomaatiga suuqgeyntaisbeddelada suuqgeyntaisbeddellada wareegabooska2Saadaalintaisbeddellada warbaahinta bulshada
Shaki kuma jiro, balooggaagu waa ilo aad u wanaagsan oo ah sawir-qaadis la yaab leh. Sidoo kale, maqaal kasta oo ka mid ah balooggaaga ayaa si xirfadaysan u qoran oo si fiican u kooban.
Waad ku mahadsantahay wadaagida macluumaadka aqoonta!
Jan 20, 2014 saacadu markay ahayd 11:36 PM
Douglas Karr ! Runtii wadaag aad u xog badan. Waxaa lagugu khasbay naqshad faa'iido leh, fikrado. Markale Aad baad u mahadsan tihiin
Febraayo 12, 2014 saacadu markay tahay 7: 35 AM
Sannadka cusubi wuxuu la yimaadaa, fursado aad u ballaadhan iyo muuqaalka khadka tooska ah ee internetka oo maalinba maalinta ka dambaysa sii adkaanaya. Warshaduhu had iyo jeer way is beddelaan, laakiin taasi waa waxa ka dhigaya mid xiiso leh.
Febraayo 12, 2014 saacadu markay tahay 7: 44 AM
Haa, Xaqiiqdu waxay tahay in Sannad kasta aan isku dayo inaan ku qanciyo fikradahayga sheeganaya ee ku saabsan waxa nuugaya
oo muhiim u ah tufaaxa ajandaha ganacsiga iyo ecommerce sanadka
Runtii qoraal aad u macluumaad badan. Runtii tani waa boosteejo fantastik ah. Waxaad ku dartay macluumaad badan bartaada. Waad ku mahadsantahay wadaagida macluumaadkan qiimaha badan. Runtii waa waxtar iyo cibro qaadasho.
Jul 30, 2014 markay ahayd 7:23 AM
Hi Douglas talooyinku waxay ahaayeen kuwo cabsi badan. Sii Dhig
Agoosto 3, 2014 saacaddu markay ahayd 1:02 PM
Douglas Macluumaad Weyn oo Waxtar Leh! Hadda waxaan ogahay in ku dhowaad go'aan qaadayaasha ganacsiga adduunka ay doorbidaan inay u adeegsadaan warbaahinta bulshada dhammaan shaqooyinkooda. Waad ku mahadsan tahay wadaagista!
Nov 7, 2020 at 10: 52 AM
Talooyinku waa kuwo cajiib ah. Sii wad dhajinta
Nov 7, 2020 at 10: 53 AM